The Adoption of a Multiple Currency System in Zimbabwe 9783848432691 - Pubgraphics Direct, LLC
by Onekai Kafuramika
Zimbabwe’s hyperinflationary period, 2000 to February 2009 swept several businesses off foot. The movement from the Zimbabwean coins and notes through bearer cheques, electronic money transfers and barter trade to the adoption of a multiple currency system posed unique challenges to the business community. The thriving small scale traders’ activity throughout the period and their continued existence when the country adopted a multiple currency system in February 2009 reveals the sector’s enduring resilience to macro-economic stresses and policy shifts.
The Adoption of a Multiple Currency System in Zimbabwe quantity
Our print to order bookstore saves you money. There are currently no special offers for The Adoption of a Multiple Currency System in Zimbabwe
Thank you for selecting our online bookstore. Currently, there are no editorial book reviews for The Adoption of a Multiple Currency System in Zimbabwe